म तामाङको तिहार - ब्लग - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
| २६ मंसिर २०७४, मंगलबार
म तामाङको तिहार
शान्ति तामाङ कार्तिक १६
म धादिङको छत्रेदेउरालीमा हुर्के बढें। त्यहीँ मेरो विद्यालय शिक्षा पूरा भयो। पेसा चाहिँ पत्रकारिता अपनाएको छु। मेरो लागि तिहार यही सेरोफेरोमा घुम्दछ र तिहारको अर्थ पनि मैले यही सेरोफेरोमा खोज्नुपर्ने हुन्छ।
पत्रकारिता व्यस्त पेसा हो। झन् अनलाइन पत्रकारितामा त द्रूत र व्यस्त रहनुपर्ने। यो पृष्ठभूमिमा पनि म तिहार मनाउन छत्रेदेउराली जाँदैछु। तिहारलाई स्थानीय परम्परा र मौलिक रुपमा मनाउन त्यहाँ जाने निर्णय गरेको हुँ। छत्रेदेउराली, जहाँका तामाङ समुदायले तिहारलाई पनि आफ्नै सांस्कृतिक पर्वजस्तै गरी मान्दै आएका छन्। त्यसैले म पनि यो पर्वलाई बिना प्रश्न सधैँ मनाउँछु।
तामाङ–बाहुनको समिश्रण भएको छत्रेदेउरालीको एउटा बस्तीमा हुर्किएको मैले देखेको र भोगेको पनि संस्कृति समिश्रण नै हो। मेरो समुदायमा दशैं, तिहार, माघे संक्रान्ति, चैते दशैं मानिन्छ तर जन्म, मृत्यु संस्कार भने बौद्ध परम्परा अनुसार लामा पुरोहितबाट गरिन्छ। त्यो ठाउँमा तामाङ समुदायमा ‘एकल्चरेसन’को प्रभाव परेका कारण त्यस्तो भएको हो।
तामाङ समुदाय त्यहाँको रैथाने समुदाय होइन। अरु ठाउँबाट बसाइ सरेर आउँदा तामाङहरुले आफूसँगै जन्म मृत्यु संस्कार लिएर आएका हुन्। दशैं, तिहार, माघे संक्रान्ति, चैते दशैं तामाङ समुदायको मौलिक चाडपर्व नभएकाले यहाँकै समुदायसँग सम्मिलित भई मनाउन थालेका हुन्। यसमा राज्य सत्ताको प्रभाव परेकाले पनि तामाङ समुदायले स्थानीयसँगै दशैं, तिहार जस्ता चाड मनाउन सिको गरेको हुनपर्छ।
यो सांस्कृतिक समिश्रणसँगै जन्मेदेखि नै यी चाडपर्व र परम्परासँग अभ्यस्त छु। तिहार रङ, फूल, झिलीमिली बत्तीहरुको पर्व, अनि पशुपन्छीका साथै भातृत्व एवम् मानवताको भावना प्रकट गर्ने पर्वका रुपमा स्थापित छ। यो पर्वमा जोकसैको पनि मन प्रफुल्ल हुने हुँदा म त्यसको अपवाद हुन सक्तिन। त्यसमाथि सयपत्री, मखमली र गोदावरीको सुवास, म जन्मे हुर्केको छत्रेदेउरालीको बेँशीका फाँटहरुमा लहरै झुल्ने पहेला धानका बालाहरुसँगै तिहार मुखरित हुने गर्दछ। यस्तो पर्वमा त्यहाँका जोकोही खुसी नहुने कुरै भएन।
वर्षामा गोरुझैँ जोतिएका र मंसिरमा फाँटहरुमा बाली थन्क्याउन व्यस्त बन्नुपर्ने कृषक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीको थकान मार्ने मौसम पनि तिहार नै हो। त्यहाँ पनि धान काट्ने चटारो लगभग यतिबेला सकिन्छ। कहिलेकाहीँ त साँच्चै यस्ता पर्वहरु नदोहोरिने हो भने जीवन निरसिलो बन्ने मात्र होइन पारिवारिक तथा नातेदारी प्रथा पनि अप्रभावकारी हुने खतरा बढ्छ। यस्ता चाडले परिवारिक सहकार्य मजबुत बनाई समुदायमा भाइचारा बढाउन प्रेरित पनि गर्दछन्।
यी सबै संस्कृतिबारे म पनि अरु जस्तै रुमलिन सक्थे होला। यसरी खर्रर भन्न सक्दिन थिएँ होला, यदि मैले समाजशास्त्रमा उच्चशिक्षा हासिल गर्न चासो नदेखाएको र पत्रकारितामा केन्द्रित नभएको भए। समाजशास्त्रको अध्ययनले मलाई म, मेरो समुदाय, मेरो समाजमा अभ्यासरत सांस्कृतिक चाडपर्व र संस्कारबारे बुझ्न उत्साहित बनायो। पत्रकारिताले त्यो उत्सुकतालाई पाठकबीच पुर्याउन सम्भव बनायो।
मेरो जिजु हजुरबुवाले काभ्रेबाट आफ्ना सन्तानलाई धादिङतर्फ बसाइँ सार्नु भएको रहेछ। बसाइँ सर्दा उहाँहरुले आफ्नो मौलिक संस्कृति लिएर आफूसँगै आउनुभएको थियो। अप्ठ्यारो लाग्ने भए पनि मेरो मातृभाषा मेरो बुवा–ममीसम्मलाई बोल्न आउँछ र बुझ्नुहुन्छ। तर हाम्रो पुस्तासम्म आइपुग्दा मातृभाषा राम्ररी नबुझ्ने भएका छौं। म जस्तै छत्रेदेउरालीका धेरैजसो तामाङ नयाँ पुस्ताले आफ्नो मौलिक संस्कृति अभ्यास गर्न रुचि देखाउन छाडेका छन्।
केही वर्ष भयो तिहारमा खेलिने द्यौसी–भैलो सांस्कृतिक विविधतामा संलग्न हुन नपाएको। होइन भने स्थानीय स्तरमा उपलब्ध बाजागाजाका साथ मौलिक भाकामा गाइने र भट्याइने द्यौसी–भैलोमा कम्ता हिँडिदैन्थ्यो। म जब बुझ्ने भएँ, त्यतिबेला मलाई ल्होसार पर्व हुन्छ भनेर कहिल्यै जानकारी भएन। दशैं–तिहार नै सबैभन्दा ठूलो पर्व हो भनेर पढियो अनि त्यसलाई नै सिरोधार्य गर्दै विशेष रुपमा मनाउने गरियो। यो जानेर–नजानेर भइरहेको छ।
७–८ वर्ष अगाडि स्कुल बिदापछि कागतिहारको दिन काग पूजा, कुकुर तिहार दिन कुकुर पूजा, गाई पूजा, लक्ष्मी पूजा हुँदै भाइटीका मनाउँथे। भाइटीकाको दिन दाजुभाइलाई टिका लगाउनको लागि भनेर एक दिनअघि देखि मखमली फूलका माला गाँसिन्थ्यो। बिहान हुने बित्तिकै नहाईधुवाई गरेर चोखो बन्ने, दाजुभाइलाई टीका लगाउनका लागि भनेर केही नखाने गरिन्थ्यो। तिहारको दिन फुपूहरु आउनुहुन्छ विशेष कोसेलीका साथ। अनि दाजुभाइलाई टीका लगाइन्छ। उनीहरुबाट पनि टीका थापिन्छ।
अहिले पनि यो परम्परागत अभ्यासले निरन्तरता पाइरहेको छ। तर, भाइटीकाको अभ्यास भने तामाङ समुदाय र क्षेत्री बाहुन समुदायबीच केही फरक छ। क्षेत्री–बाहुन समुदायले सप्तरङगी टीकाको साथमा रातो टिका लगाउँछन्। तर तामाङहरुले रातो टीका नलगाई सप्तरङ्गी टीका मात्र लगाउँछन्। सम्भवतः तामाङ समुदायमा रातोलाई नभई सेतो रङलाई पवित्र मान्ने गरिएकाले त्यस्तो भएको होला।
केही वर्षयता दशैं–तिहार मनाउन जब म काठमाडौंबाट छत्रेदेउराली जाने तयारीमा हुन्छु, केही तामाङ दाइहरुले सोधेको प्रश्नले मलाई अल्मलाउँछ। उनीहरुको प्रश्न हुन्छ, ‘बैनी दशैं– तिहार त नक्कली तामाङहरुले मात्र मनाउँछन्।’
यो प्रश्नको सामाना मैले गर्दै आएकी छु अचेल। यो प्रश्नअनुसार सक्कली हुने प्रयासमा म आफ्नो जन्मस्थानको परम्पराबाट विमुख हुने पो हो कि? डर पनि लाग्छ। दशैं–तिहारै नमनाउने हो भने त्यस ठाउँसँग मेरो सम्बन्ध कमजोर हुने निश्चित छ। मेरा लागि दशैं र तिहार पहिचानको गहन विषय नभई जन्मस्थान र म बीचको सम्बन्धको प्रतीक हो। सम्भवतः पछिल्लो समय यस्ता प्रश्न अरु शिक्षित तामाङहरुले पनि सामना गरिरहेको हुनुपर्छ।
नेपालको संविधान २०७२ मा धर्मनिरपेक्ष भनेर उल्लेख गरिएको छ। संविधानअनुसार मलाई कुनै धर्म मान्न रोकटोक छैन। तैपनि मेरो संस्कृति, परम्पराप्रति मेरो चासो र जिज्ञासा बढ्न थालेको छ। अनि यसको महत्वबारे पनि केही जान्ने उत्सुकता बढेको छ। र त म भन्छु, यस्तै छ, म तामाङको तिहार।
प्रकाशित १६ कार्तिक २०७३, मंगलबार | 2016-11-01 08:17:41
शान्ति तामाङ नेपालखबर संवाददाता हुन्
शान्ति तामाङबाट थप
असन बजारः जहाँ अझै मगमगाउँछ रैथाने सुगन्ध
मछिन्द्रनाथ पुनर्निर्माण नहुँदा स्थानीयको मन दुख्यो
हनुमानढोकामा अमेरिका, चीन र जापान
काष्ठमण्डप पुनःनिर्माण किचलोमा फस्यो
उपत्यकाको सवारी जामबारे एम्बुलेन्स चालकका पीडाः सम्झदा पनि दिक्क लाग्छ
जुरे पहिरोका तीन वर्षः न बास, न सरकारको आस
यी हुन् पहिलो महिला गुल्मपति अर्थात् सृष्टि खड्का
शहीद सम्झनाउने ४६ करोडको पार्क अलमलमै
किन लिँदैछ महानगरले पार्किङ शुल्क?
पृथ्वीनारायणलाई पटकपटक छेक्ने प्राचीन नगर अर्थात् कीर्तिपुर
जातीय राजनीतिको भुङ्ग्रोमा मधेश
सर्लाहीबाट महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महत्तोको क्रमशः महोत्तरी र धनुषा आगमन, अनि मोरङ्ग तथा सुनसरीबाट उपेन्द्र यादवको सप्तरी प्रवेश जातिवाद...
म जान नसकेको त्यो टक शो
त्यो दिन मैले भक्तपुर सिरुटार पुगेर ८६ वर्षका बा र ७९ वर्षकी आमासँग दुई घण्टा बिताएँ। टिभी टक शोमा गएको भए म बा आमालाई भेट्न जान सक्ने थिइनँ।
राजनीति फुटबल हो, रवीन्द्र मिश्र टेबल टेनिसका खेलाडी
मलाई नेपाली राजनीतिक दलका विचार र नेतामा भन्दा हुन्डरीमा बढी विश्वास छ। हुन्डरी, जसले भाग्य र दुर्भाग्यसँगै लिएर आउँछ।
जब सहपाठीले नै ‘भोट किन मागेको’ भन्दै अपहरण गरे
आफन्तहरुले विष्णु खड्कालाई जबर्जस्ती फुत्काउन सफल भए। आफन्तको पासमा पुगेका विष्णुलाई कब्जामा लिन नसक्ने भएपछि उनीहरूले छाडिदिए र मलाई लिएर हिंडे।
‘टाढाबाट’ स्तम्भ एउटा पहाडको चुचुरोबाट अर्को पहाडको चुचुरोको आकृती नियाल्ने प्रयास हुनेछ। यो स्तम्भ, हिलारी स्टेपबाट होइन तेङबोचेबाट सगरमाथाको...
नेपालमा लगानी हुने संभावनाको हरेक चिनियाँ योजनालाई कांग्रेसले विरोध र शंकाको नजरले हेरिरहेको हुन्छ। .... नेपालका कम्युनिष्टहरूले सधैं भारतलाई तारो...
मतपरिणाम चमत्कार हो, कांग्रेस कि सुध्रिन्छ कि सिद्धिन्छ
यो चुनावले प्रतिपक्ष कमजोर बनाएको छ, यो प्रमुख नकारात्मक पक्ष हो। प्रतिपक्षमा भएको शक्तिले हस्तक्षेपकारी रुपमा काम गर्न सकेन भने वाम सरकार निरकुंश बन्न सक्छ। यो निश्चित जस्तै छ।
चलाख ओली-दाहाल, ‘लद्धु’ देउवा
चुनावले लोकतन्त्रलाई दुई तह माथि उठाएको छ
लेखनका यस्ता अफ्ठ्यारा
रुचिर जोशी - प्राउस्टले ओच्छ्यानमा बसेर लेखे। क्यापोटीले काउचमा पल्टेर लेखे। हेमिङ्वेले उभिएर लेखे। हेमिङ्वे र क्यापोटी दुवैलाई पर्याप्त मात्रामा अल्कोहल चाहिन्थ्यो। अझ मार्गरिट डुरास त दैनिक पाँच बोतल रेड वाइन घुट्क्याउँथिन्। जसरी लेखे पनि लेखक बन्नका लागि...
ओशोले पोखरामा चलाएको कम्युन
पोखराका प्रकट उर्फ ‘भ्यालेण्टाइन ब्राण्ड’
हात्ती र मानिसबीच यतिधेरै समानता
सर्लाहीबाट महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महत्तोको क्रमशः महोत्तरी र धनुषा आगमन, अनि मोरङ्ग तथा सुनसरीबाट उपेन्द्र यादवको सप्तरी प्रवेश जातिवाद प्रवद्र्धनका निम्ति संरक्षित भूमिको चयन बाहेक अरू केही...
संसारकै सबैभन्दा ठूलो लिथियम-आयोन ब्याट्रीले बिजुली वितरण थाल्यो
मंसिर १५ - साउथ अष्ट्रेलियामा संसारकै सबैभन्दा ठूलो लिथियम-आयोन ब्याट्रीले विद्युत वितरण थालेको छ। एक सय मेगावाटको सो ब्याट्री टेस्ला कम्पनीले निर्माण गरेको हो।
रुसले प्रक्षेपण गरेको मौसमसम्बन्धी स्याटेलाइट सम्पर्कविहीन
ताइवानमा ९ घण्टासम्म लाग्यो इन्द्रेणी, गिनिज रेकर्ड तोड्ने अपेक्षा
मंसिर १८ - इन्द्रेणी हेर्न मन नपराउने को होला? प्रायःजसो यो क्षणिक हुन्छ, धीत मर्न नपाइ हराइहाल्छ। तर चाइनिज कल्चर युनिभर्सिटी ताइपेइका प्राध्यापक र विद्यार्थीले भने गत साता ९ घण्टाका लागि इन्द्रेणी हेर्ने मौका पाएका छन्।
८१ वर्षे हवाइ सुन्दरी, जो ६० वर्षदेखि सेवामा छिन्
भारतमा बिरुवा खाएको अभियोगमा ८ गधालाई ४ दिन जेल
समानुपातिकमा कुन दलले कति मत प्राप्त गरे ?
देउवा सरकारका अबका नियुक्ति बदर हुन्छः एमाले
नयाँ घेराबन्दीमा प्रधानमन्त्री देउवा
पुसको तेश्रो साताभित्र नयाँ सरकार बन्ने
बामवन्थी विजयका आधार के?
मौन अवधिमा ‘मत किन्ने’चलखेल
बेइजिङमा खुल्यो नेपाली भाषा विशेषज्ञ समिति
चीनको संस्कृति मन्त्रालयको वैदेशिक संस्कृति सम्पर्क व्यूरो तथा बेइजिङ भाषा तथा संस्कृति विश्वविद्यालयको संयुक्त प्रयासमा सोमबार नेपाली भाषा...
बाबुरामका मामा भन्छन्ः भाञ्जाको जीत हर्ष न बिस्मात!
‘हिजो म नराम्ररी झुक्किएछु। प्रकाश (कांग्रेसबाट गोरखा २ (ख) प्रदेशमा विजयी) ले बुवा हिँड्न सक्नुहुन्न गाडीमा चढ्नुस् भन्नुभयो, म चढेँ। कुनबेला...
जीतपछि प्रचण्ड हर्षित, परिवार भावुक (तस्वीर)
जन्मदिनको अघिल्लो दिन चितवन–३ मा विजयी भएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निकै हर्षित देखिएका छन्। तर, उनका परिवारका सदस्यहरु...
नारायण जोशीको उत्कृष्ट बलिङमा नेपालको सहज जित
एसीसी यू–१६ इस्टर्न रिजन क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गतको सोमबार भएको पहिलो खेलमा नेपालले आयोजक थाइल्याण्डलाई १३३ रनले पराजित गरेको छ।